Guddoomiyaha wakiilada Somaliland oo kahadlay khilaafka xilkiisa kataagan (dhegayso) – Radio Daljir
Guddoomiyaha wakiilada Somaliland oo kahadlay khilaafka xilkiisa kataagan (dhegayso)
Agoosto 13, 2017 5:54 g 0
Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ee lagu muransanyahay habkii ay u dhacday doorashadiisa Baashe Maxamed Faarax ayaa ka hadlay khilaafka ka jira sharci ahaanshihiisa.
Isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland ayuu sheegay golaha wakiilada inuu galay fasax todobo maalmood ah oo ay kusoo dhamaysanayaan khilaafka ka dhex jira shir guddoonka golaha wakiilada Somaliland.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle oo ahaa musharaxii kula tartamay Baashe Maxamed Faarax shir guddoonka wakiilada Somaliland ayaa ku doodaya doorashada inay u dhacday si musuqmaasuq ah oo codadkiisii loo weeciyay dhanka kale, arrintan oo khilaaf ka dhex abuurtay golaha wakiilada Somaliland ayaa dacwad kusaabsan waxaa loo gudbiyay maxkamadda sare Somaliland, inkastoo ayan jirin go’ aan ay weli ka gaartay dacwadan.
Guddoomiye Siciid Anteeno Maankiisa Maxaa ka Guuxaya? (dhegayso)
Warka Fiidnimo, Maxamed Lakiman, Daljir Bossaso (dhegayso)